Moonship: Ampitomboy ny fiovam-po amin'ny fividianana vondrona ao amin'ny fivarotanao Shopify | Martech Zone
Moonship: Ampitomboy ny fiovam-po amin'ny fividianana vondrona ao amin'ny fivarotanao Shopify
Alatsinainy, Novambra 22, 2021 Alatsinainy, Novambra 22, 2021 Douglas Karr
Moonship dia mino fa ny hoavin'ny ecommerce dia ara-tsosialy, ary izy ireo dia eo amin'ny iraka ahafahan'ny orinasa amin'ny habe rehetra hitombo amin'ny alàlan'ny teny organika. Tsy isalasalana fa ny mpanentana tsara indrindra anananao amin'ny vokatrao dia ny naman'ny namana iray…
Moonship dia manana endri-javatra lehibe 3 izay mitondra ny fiovam-po ara-tsosialy Shopify:
Tabilao mialoha ny fividianana
Ampitomboy ny fizarana avy amin'ny fifamoivoizana misy anao amin'ny tabilao fividianana vondrona. Miaraka amin'ny dian-tongotra kely sy ny fampidirana tsy misy olana amin'ny dia efa misy mialoha ny fividianana, dia mitondra fizarana sy referral tsy manao sorona ny traikefanao na ny marika.
Fanomezana aorian'ny fividianana
Omeo fihenam-bidy ny mpanjifanao mba hozaraina amin'ny namany avy hatrany aorian'ny fividianana. Mahazo ny tombontsoa rehetra amin'ny baikon'ny vondrona ianao amin'ity toe-javatra ity, afa-tsy ny mizara avy amin'ny hatsaran'ny fony ny mpanjifa fa tsy amin'ny fihenam-bidy ho an'ny tenany.
Tolotra Smart Group
Fantaro, lasibatra ary ovay ireo mpiantsena eny amin'ny fefy amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo fahafahana miditra amin'ny baikon'ny vondrona efa lany daty. Ampitomboy hatramin'ny 40% ny tahan'ny fiovam-po miaraka amin'ny kapoka iray-roa amin'ny fihenam-bidy sy porofo ara-tsosialy amin'ny fotoana tonga lafatra.
Amboary ny bika aman'endrikay ao anatin'ny minitra vitsy dia tsy ho fantatry ny mpanjifanao hoe aiza no hiafaran'ny marikao Moonship manomboka.
Mamandrika Demo na misoratra anarana izao!
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i Moonship ary mampiasa rohy afiliana ato amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: fihenam-bidy namanafividianana vondronatolotra vondronamampitombo ny tahan'ny fiovam-povolanafanomezana avy amin'ny fividiananafihenam-bidy mialoha ny fividiananascommerceshopifysmart group tolotrafividianana ara-tsosialyvarotra sosialy
Pejy fitarihana: Angony ny fitarihana miaraka amin'ny Pejy Fampandrenesana, Popups, na Bare Fampandrenesana
Telbee: Makà hafatra amin'ny feo avy amin'ireo mpihaino Podcast-nao